नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्न- केपी ओलीसँग नजुधेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छैन? (भिडिओ) :: मनोज सत्याल :: Setopati
नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्न- केपी ओलीसँग नजुधेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छैन? (भिडिओ)
नेकपाको एकीकरण सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको तयारीमा छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्को तर्फ उसले नेकपा एमालेसँग पनि संवाद जारी राख्ने भनेको छ। अबको सरकार, ओली पक्षमा लागेका माओवादी नेताको फिर्ती र नेकपा एमालेसँगको सहकार्यको सम्भावनाबारे सेतोपाटीका मनोज सत्यालले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन्।
अन्तर्वार्ताका मुख्य मुख्य बुँदाहरु -
प्रधानमन्त्री आफैंले भंग गरेको प्रतिनिधिसभामा उहाँ जानु हुँदैन, राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं। अब एकीकरण नै पछाडि धकेलिएपछि उहाँले स्वत: राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो।
अहिलेसम्म सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका छैनौं। अहिलेको परिस्थितिमा राजीनामा दिएर उहाँले सरकार गठनको बाटो खोल्नुपर्छ।
अहिलेको बेला सरकार निर्माण, संविधान कार्यान्वयन र राजनीति सही दिशामा लैजाने विषयमा नेपाली कांग्रेस र जसपासँग वार्तामा जोड दिएका छौं। तर एमालेसँगको वार्ता र सहकार्य अस्वीकार गर्दैनौं।
हामी कम्युनिष्ट एकताको पक्षधर हौं। उहाँले राजीनामा दिनुभयो, पार्टीलाई पनि नयाँ ढंगले अगाडि बढाऔं भनेर प्रस्तुत हुनुभयो भने हामी खुला ढंगले छलफल गर्न तयार हुन्छौं।
पार्टी एकता गर्ने कि भंग गर्ने अदालतले भन्ने हो? नामको कुरा छाडेर एकीकरण भंग भयो भन्न पाइन्छ? यसप्रति हाम्रो तीव्र असहमति छ।
बादल लगायतका नेताहरूलाई ल्याउने वा कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा म टिप्पणी गर्दिनँ। अदालतको फैसलाले सामान्यतया आफ्नो पार्टीमा फर्कने भनेको छ। त्यसबारे उहाँहरू आ-आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई छिट्टै आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न अपिल, विचार र स्थिति गर्न चाहन्छौं।
प्रचण्डले नै भयो आधा आधा किन भन्नुपर्‍यो राम्रो सरकार चलाउनुहुन्छ भने तपाईं नै चलाउनुहोस् भनेर केपी ओलीलाई दिएको हैन। तर सरकार बनेपछि ९ महिनासम्म पार्टीको कुनै बैठकमा अजेण्डा नै बनेन। बरू सरकारले पर्फरमेन्स नदेखाएपछि पार्टीमा छलफल गरौं भनेको हो।
केपी ओलीसँग नजुध्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छैन। मुख्यकुरा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भएन भने संविधान नै हत्या गरिदिने र पार्टी नै फुटाउने काम केपी ओलीले गर्नुभयो, त्यो नितान्त गलत हो। व्यवहारिक रुपमा पार्टी र सरकारलाई नयाँ ढंगले लैजाने वातावरण तयार गर्नुभयो भने एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म अझै छु।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २५, २०७७, १०:०८:००